မတ်လ 2014 | 10 ၏စာမျက်နှာ 70 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » မတ်လ (စာမျက်နှာ 10)
မီဒီယာသစ် Lounge ဟာ Host မှ NMX ပွဲများနှင့် NAB ပြရန်ရေးအဖွဲ့
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့် EngineeringNMX ပွဲများနှင့် NAB ပြရန်အဖွဲ့မီဒီယာသစ် Lounge ဟာ Las Vegas မှာဘလော့ (ဘလော့ဂ်) Host မှ "ကျနော်တို့မီဒီယာအသစ်ပညာရှင်များရွယ်တူတွေနဲ့ချိတ်ဆက် & အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဘယ်မှာ NAB Show မှာတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန် NMX အတူလုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့် NAB ပြရန် www.lasvegasnvblog.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ ... ", ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအဘယျသို့
Bexel ကျယ်ပြန့် Fiber Network ကိုအတူအကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ (r) ချိတ်ဆက်
ကုမ္ပဏီရဲ့ Fiber Optic အခြေခံအဆောက်အအုံ (BURBANK, ကာလီဖိုးနီးယား။ ) ဂလိုဘယ်ထုတ်လွှင့်ထောက်ပို့စိန်ခေါ်မှုများဖယ်ရှား - Bexel, အ Vitec Group ၏န်ဆောင်မှုများတိုင်းတစ်ယူနစ်နှင့်ထုတ်လွှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများတစ်ဦးဦးဆောင်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ပံ့ပိုးပေးသည် 86th အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ပြွန်ပေးအပ် (r), အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး-အန်တုဖိုင်ဘာနှင့်အတူဆိုက်ကနေအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ်ဍာ, အပေါငျးတို့သ ...
XMS စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အဘို့သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' နယူး TimePlanner လျှောက်လွှာဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှဖျတ်လတ်သွက်လက်စေများရရှိစေ
RENNES, ပြင်သစ် - မတ်လ 28, 2014 - သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကယနေ့ပြုလုပ် TimePlanner, အ 2014 NAB ပြရန်မှာ XMS (TM) ကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်အသစ်တစ်ခုလျှောက်လွှာဖွယ်ရှိကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ရှုပ်ထွေးသောဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်အပြောင်းအလဲများများ၏အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ဖွင့်ပေးခြင်း, TimePlanner, XMS အသုံးပြုသူများကသူတို့လျင်မြန်စွာဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်သာ ...
Vinten Radamec ရဲ့တော်လှန်ရေး APS စနစ်မြင့်တက်ရောင်းအား
စိန့် Edmund သင်ျဂွိုဟျ - စက်ရုပ်ကင်မရာထောက်ခံမှုစနစ်များအတွက် Vinten Radamec®တစ် Vitec Group ကုမ္ပဏီနှင့်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်၎င်း၏အလွန်အမင်းမျှော်လင့် Absolute Positioning System (APS) အညွှန်းစနစ်၏မကြာသေးမီကဖြန့်ချိအောက်ပါဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းထုတ်လွှင့်ကနေသိသိသာသာအမိန့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါတော်လှန်ရေးသမား APS ပြိုင်ဘက်ကင်းပို့ဆောင်, Vinten Radamec ရဲ့ Fusion စက်ရုပ်အောကျခံခုံနှင့်အတူချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခု positioning ကိုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ...
YANGAROO မူပိုင် cloud-based Delivery ပေး
YANGAROO အံ့ဖှယျနှင့်မူပိုင်ခွင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဖြန့်ဖြူးစနစ် (DMDS) ပလက်ဖောင်း, လုံခြုံတဲ့အတှကျအခွင့်ပြုထားသည့်မိုဃ်းတိမ်-အခြေစိုက်စခန်း software ကိုဖြေရှင်းချက်လျင်မြန်စွာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့် Advertising ကြော်ငြာ, Music နှင့်ဆုချီးမြှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဦးဆောင် service provider ကဖြစ်ဆက်လက် ဖြန့်ဝေဘို့သင့်အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ငွေရရှိအောင်လမ်း! အဆိုပါ YANGAROO 's 100% cloud-based နည်းပညာကြောင့်ဆန်းသစ်ဖြစ်ပါတယ် ...
NAB Show ကိုမီဒီယာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင် 4K ရုပ်မြင်သံကြားပြသမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများအတွက် ultra high-definition စံချိန်စံညွှန်းများတိုးမြှင့်အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အစည်းအဝေးများ, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ပြား feature ပါလိမ့်မယ်။ Las Vegas မှာဧပြီလ5-10 ကျင်းပ, NAB Show ကိုဖန်တီးစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပလက်ဖောင်းအားလုံးဖြတ်ပြီးဖျော်ဖြေရေးဖြန့်ဝေသူကိုပညာရှင်များအဘို့အကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။
Channel ကိုမျှဝေခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် NAB ထုတ်ပြန်ချက်
ဝါရှင်တန်ဒီစီ - ထိုထုတ်လွှင့်ရောင်စဉ်မက်လုံးပေးလေလံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အတူတူပင်စျေးကွက်နှစ်ခုထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာတို့ကရုပ်သံလိုင်းခွဲဝေမှုဆန်းစစ်တဲ့ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. ယနေ့ဖြန့်ချိမယ့်အစီရင်ခံစာအပေါ်တုံ့ပြန်ရာတွင်အောက်ပါကြေညာချက်ဆက်သွယ်ရေးဒန်းနစ်၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌ NAB မှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ် Wharton:
Vision ၏သက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုပြီးနောက်များအတွက် GPU ကိုထောက်ခံမှုနှင့်အတူ ReelSmart Motion Blur5ဖြန့်ချိ, နောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကို, မီဒီယာ Composer Motion,, နျူကလီးယား, Premiere Pro ကို, Scratch နှင့် Vegas Pro က: RE
(ဆန်ဖရန်စစ္စကို, ကယ်လီဖိုးနီးယား-မတ်လ 28, 2014) RE: အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်Adobe®: Vision ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ကောင်းချီးသက်ရောက်မှု plug-in ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်၏ထုတ်လုပ်သူ software ကိုအနိုင်ရများအတွက် GPU ကိုထောက်ခံမှုနှင့်အတူ ReelSmart Motion Blur ™ဗားရှင်း5များလွှတ်ပေးရန်ကိုကြေညာ ®; Apple®; ဗိုလ်လုပွဲဖြတ်Pro®; Avid®မီဒီယာComposer®, Symphony®နှင့်Newscutter®; အဆိုပါ Foundry နျူကလီးယား™; Adobe Premiere Pro®; Scratch®သိမ်းသွင်း; နှင့်Sony®Vegas® Pro ကို။ ReelSmart Motion Blur ...
10 ၏စာမျက်နှာ 70«ပထမဦးစွာ...«89101112 » 203040...နောက်ဆုံး»